WatchOS 3 inounzwa nezvakawanda zvitsva maficha | Ndinobva mac
WatchOS 3 inounzwa nezvakawanda zvitsva maficha
Iyo Apple Watch 2, ine huwandu hukuru hwezvinhu zvitsva zvese mune zvemahara uye software, izvo zvinoita kuti chishandiso chiwedzere kushandiswa muzuva redu zuva nezuva. Muchikamu chino tichakurukura chinomiririra chakanyanya kuratidzwa kwesystem yako, WatchOS 3.
Kwemakore akati wandei, Apple yanga ichinetsekana nezve hutano hwedu uye senge iri mune yekutanga vhezheni yayo, chikamu chakatsaurirwa hutano hwepanyama uye hupenyu hwedu, zvakakosha zvine chekuita. Mupfungwa iyi tine kubatanidzwa yemawadhi matsva, akawanda mawadhi. Hutsva mashandiro anoitirwa kufema kana kudzora mimhanzi inosanganisirwa, kunyangwe ichinyanya kukosha uye kugadziridzwa ne inoshandiswa pakuita muviri.
Chimwe chikamu ndeche kusangana nevechitatu-bato kunyorera. Semuenzaniso, zvinotibatsira pakuronga rwendo. Nekubatsirwa kwe Mepu, ichatitungamira panguva yemugwagwa uye ichatipa ruzivo rwakanyanya kukosha rwatinarwo kwakatikomberedza.
Apple's pachayo zvinoshandiswa, senge Zviyeuchidzo, inoitwa zvakare muClock, kuve wakasununguka kwazvo kugamuchira mabasa atopedzwa, chete newachi yedu.
Kunyangwe chikamu chakakoshesa chiri icho kuvandudza kukuru kwekuita. Kwete chete iyo inovandudza kumhanya, kurodha uye mashandiro ekushandisa, asi mashandiro e chengetedza zvinoshandiswa zvakanyanya kushandiswa mundangariro inokutendera iwe kuti uwane iwo mune imwe nguva.
Kune rumwe rutivi, Control Center Iyo zvakare inogamuchira nhau, ichichinja nzvimbo yemamwe mabasa uye kusanganisa nyowani, izvo zvinoita kuti ruzivo ruwedzere uye rwunakidze.
Ehezve, iyo Apple Watch ndiyo inotakurika mudziyo muApple renji, iwo akanyanya kurodha kunyorera mumwedzi ichangopfuura haigone kushayikwa: vhezheni yePokemon GO, yakanyatsogadziriswa kuchinhu, zvekuti zvinotibvumidza kuti tigamuchire ruzivo nguva dzese nezve mamiriro ezvinhu evatambi anotorwa, pamwe nedaro rekuvawana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » WatchOS 3 inounzwa nezvakawanda zvitsva maficha
Zvepamutemo: isu tine EarPods uye AirPods